Ford dia nisarika emoji handefa doka nefa tsy fantatsika | Famoronana an-tserasera
Ford dia nanamboatra miafina emoji vaovao ho an'ny pickup tahaka ny tsy itiavany an'io zavatra io sy ny fanaovana dokambarotra nefa tsy fantatsika. Toa izany no zava-misy araka ny fantatsika ankehitriny sy ny zavatra gaga, maninona no ho nieritreritra fa mety hanao dokam-barotra ny emoji indraindray?
avy amin'ny ny kaontinao Twitter Nandray ny kodiarana izy ireo ary nitondra andianteny maromaro hanambarana fa namorona emoji-pikomiana vaovao izy ireo. Ny fialan-tsiny dia ny 100 taona nateraky ny fiara Ford sy ny andro emoji manerantany.
Omaly 17 Jolay dia tamin'ny Ford dia nanambara ny emoji pickup-ny amin'ny antsoina ankehitriny hoe emoji day (somary adala isika, sa tsy izany?). Ny emoji resahina dia mampiasa ny loko manga izay mamaritra ny marika ary tsy niafina firy izy ireo rehefa naneho ireo jiro mifamatotra amin'ilay marika.
Ka mandra-pahoviana no haharitra jereo emoji marika zava-pisotro malefaka mena? Hamburger izay avy any Burger King na McDonalds? Toa sarotra ny manavaka ny habaka kely toy izany ho an'ny emoji, saingy tsy ho gaga isika raha manomboka mahita azy ireo. Eto dia misy manana hevitra iray, ary an-jatony no lasa any aoriany ...
fankalazana #WorldEmojiDay ary mihoatra? fiara Ford nandritra ny taona maro, nanamboatra zavatra vaovao izahay… Ho avy ny emoji kamiao? pic.twitter.com/jXPDlvmauy
- Ford UK (@forduk) Jolay 17, 2019
Ny ratsy indrindra dia izany ireo izay mikarakara Unicode, izay toy ny fenitry ny emojis, dia nazavain'izy ireo fa ny fanohanan'i Ford dia tokony ho nohazavaina mba hahafantaran'ny rehetra fa be ny vola ao ambadik'io fakana io.
ihany ho hitantsika raha tonga amin'ireo rafitra miasa ireo izany amin'ny farany ary samy mandray fanapahan-kevitra ny tsy hampiditra emoji izay manao dokam-barotra mazava. Anjarantsika ihany koa ny manamboatra azy io sy mampiasa ireo fiara somary ratsy tarehy ireo fa maneho tsara ny indostrian'ny fiara, ny fiara ary ny hafainganana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Emojis ho fantsona dokam-barotra vaovao?
Volavola miaraka amin'ny Canva